आत्तिए माओवादी जनसंगठन र नेता ! एमाले एजेण्डामा कडा, ब्यवहारमा नरम – YesKathmandu.com
आत्तिए माओवादी जनसंगठन र नेता ! एमाले एजेण्डामा कडा, ब्यवहारमा नरम
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसियल नेपालले आइतवार सम्मानजनक हैसियत नभए पार्टी एकता नगर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निवासमै पुगेर दवाव मुलक संदेश दियो । माओवादीको बिद्यार्थी संगठन, मजदुर संगठन, प्रेस सेन्टर र प्रभावशाली नेताले पनि सम्पानजनक हैसियतको कुरा उठाउँदै प्रचण्डलाई निरन्तर दवाव दिन थालेका छन् । माओवादी जनसंगठनदेखि नेतासम्मको दवाव एकता विरोधी नभई आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नेतर्फ बढि केन्द्रीत देखिएको छ ।
विशाल एमाले र खुम्चिदै गएको माओवादी केन्द्रको हैसियत एउटै हुन सक्दैन तरपनि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न माओवादी नेता र जनसंगठनका प्रमुखहरु दैनिक कसरतमा छन् । ‘चुनाव र मतपरिणामका आधारमा पार्टीको हैसियत देखाउनु हुँदैन, दुई पार्टीको एकता वरावरका आधारमा हुनुपर्दछ’–माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले भने ‘सिद्धान्त र पार्टी संगठनमा दुवै दलको समान हैसियत हुनुपर्दछ ।’
दलको हैसियत नाप्ने प्राविधिक पक्ष निर्वाचन परिणाम नै हो । परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रभन्दा एमाले दोब्वर बढि छ । निर्वाचनमा ४०, ६० को भागबन्डा गरेका एमाले र माओवादीले परिणाम ७०, ३० को ल्याए । एमालेले ७० प्रतिशतमा पुग्यो भने माओवादी ३० प्रतिशतमा खस्यो । यही आधारमा पार्टी संगठनको हैसियत कायम गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले नेताहरु उभिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले संगठनमा ३० प्रतिशत मात्र पाए धेरै नेताहरु भूमिका विहीन हुने निश्चित छ । आफ्नो भूमिका कमजोर वा विहीन हुने भएपछि अध्यक्ष दाहाललाई उनीहरुले दवाव दिन थालेका छन् । जनसंगठनमा युवा र बिद्यार्थीको प्रमुख पेचिलो बन्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले युवा संगठनको नेतृत्व वाइसिएलले पाउनु पर्ने जवरजस्त दवाव दिएको छ भने एमालेको युवा संगठन सशक्त छ ।
त्यसैगरी अनेरास्ववीयू र अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारीको भागबन्डा पनि पेचिलो बन्ने भएको छ । दुवै संगठनका बिद्यार्थीले नेतृत्व दावी गरिरहेका छन् । पत्रकारहरुका संगठन प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरको नेतृत्व कसले लिन भन्ने बिषयमा आन्तरिक संघर्ष चलिसकेको छ ।
माओवादी जनसंगठन र नेताहरुले आफ्नो भूमिका खोजिरहेका बेला एमाले नेताहरु भने मौन बसेका छन् । एजेण्डामा आफ्नो कडा तर्क र अडान राखेपनि बाहिर भने एमाले नेता कार्यकर्ता शालिन देखिएका छन् । भागवन्डाका बिषयमा सार्वजनिकरुपमा कुनैपनि प्रतिक्रिया एमाले नेता कार्यकताले दिने गरेका छैनन् ।
लालु यादवलाई चुरेभावरको चेतावनीः जथाभावी नबोल
मदिरा सेवन गरी ब्यापारी धम्क्याएको आरोपमा लोकेन्द्र बिष्टबिरुद्ध प्रधानमन्त्रीसँग उजुरी